Hweusere Husiku Kupera Kunotsanangurwa: Chokwadi cheMhandara Shaman chichauraya Chang-seok kana monk Seohwa - Pop-Tsika
Hweusere Husiku Kupera Kunotsanangurwa: Chokwadi cheMhandara Shaman chichauraya Chang-seok kana monk Seohwa
Husiku hwe8, hwakaburitswa paNetflix munaChikunguru 2nd, imovie yeKorea inotanga pane chinyorwa chinonakidza: chikara chakada kuvhura magedhi egehena.
Meso echikara maviri, anomiririra kushushikana kwevanhu uye ruvengo, zvinofanirwa kuuya pamwechete kuti vhure masuo. Nekudaro, zvaitendwa kuti Buddha akakwanisa kutora ziso raifananidzira ruvengo nekuriviga mubhokisi muThe 8th Night.
Rimwe ziso, rakatanga kupunyuka, rakatora miviri yevanhu vanomwe, husiku humwe mushure meumwe. Pahusiku hwechisere, dai ziso raive rakabudirira, raigona kuzadzikisa zvaidiwa nechikara.
Chinyorwa chakagovaniswa neNetflix Korea (@netflixkr)
Panzvimbo iyoyo, uchifunga kuti yakanga yawana masimba ese, iri ziso rakadzoka chete kuzotorwa naBuddha futi.
Verenga zvakare: AOA musikana waimbove musikana wemukomana akataura, anoti chinyorwa chechidhori hachina kunaka kwaari
kuudza shamwari yako kuti unomuda
Ziso rekushushikana rakamutswa sei muThe 8th Night?
Iri ziso rakavigwa kumadokero, murenje. Zvese izvi pakutanga zvakaridza senge ngano kubva kare kare muThe 8th Night. Nekudaro, nhoroondo iri kudzokorora, uye iyo 8 Husiku iri nezve zvinoitika kana chikara chamuka. Iyo chikara yakawana mubatsiri, uyo akanzi munyori wenhema.
Uyu murume akamisa boka pasi pechirevo chekufungisisa. Akave nechokwadi zvakare kuti munhu wese aiti aive asiriye aizoziva nezve zvaakange ari mugwara. Akashandisa ropa mukati mevanhu vakasarudzika kuti vamutse ziso rekushushikana muThe 8th Night.
Ndiani angamise chikara muThe 8th Night?
Iye chete anogona kumisa chikara ichi monk Seohwa (Lee Sung-min), asi akaonekwa achirwa nezvake zvipoko, chaizvo. Zvakazoitika kuti mweya yakamutambudza ichitarisira kuwana rubatsiro rwake kukwira kwavo muThe 8th Night.
Verenga zvakare: Chipatara Playlist mwaka 2, chikamu chechitatu: Will Lee Kyu-hyung mune yake cameo achabvumidza Seong-hwa kuti ape rudo neIk-jun mukana?
Nekudaro, mushure mechiitiko chekare chakabatana nemukadzi akauraya mhuri yake, mumongi Seonhwa akasiya imba yake yemamongi, uye basa rekuchengetedza bhokisi rechipiri rakawira pamonki mukuru. Ingori zuva mushure mekuti ziso rekushushikana ramuka, uyu monki akafa muThe 8th Night.
Saka basa rakadonha zvakare panaSeohwa, kana kuti ndozvaitarisirwa nemunhu wese, kusanganisira monk mukuru muThe 8th Night.
Wechinomwe munhu aifanirwa kuve mhandara shaman muThe 8th Night.
Kim Yoo-jung's Ae-akamhanya sei zvine hukama nemhandara shaman muThe 8th Night?
Kekutanga nguva Kim Yoo-jung akaonekwa mufirimu yaive apo rookie monk Chang-seok (Nam Da-reum) akasiya imba yemamongi kunotsvaga monk Seohwa muguta. Akatora bhokisi rematombo raive neziso rechipiri pamwechete naye.
Nekudaro, mubustand, akarasa bhegi rake uye pamwe naro, bhokisi. Kim Yoo-jung akaonekwa kekutanga muchiteshi chemabhazi. Iye akanyangarika mukati menguva pfupi, achiratidza kuti anga asiri munhu chaiye.
Verenga zvakare: BTS Funko Pops Dynamite edition preorder: Kuburitswa zuva, mutengo uye zvese zvaunoda kuti uzive
Izvi zvakaita kuti vateereri vatende manyepo kuti ndiye aive shaman, iye wechinomwe muenzi. Mukupedzisira, zvakaratidzwa kuti aive asiri mhandara shaman shure kwezvose.
Chichiri chaLee Sung-min saSeohwa naNam Da-reum seChang-seok muThe 8th Night. (Instagram / NetflixKr)
Sei musikana uyu aive pamba pemhandara shaman muThe 8th Night?
Uyu musikana (Kim Yoo-jung) akazove chipoko. Akatungamira Chang-seok kuti atende kuti ndiye aive shaman. Chang-seok paakanzwa kubva kumonoki Seohwa kuti nzira chete yekumisa monster yaive kuuraya shaman, Chang-seok akapedzisira atiza naye.
Anomuendesa kuimba yemamongi, kana kuti ndizvo zvaakatenda. Seohwa akazoziva kwaienda Chang-seok kwaivewo nechikara, uye akafunga kuenda kuimba yemamongi zvakare ndokuronga musungo.
Saka chikara pachakabudirira kutora muridzi wayo wekupedzisira, chakasara chete kuita kutora mubati wekasiketi wedombo.
Verenga zvakare: STAY trend #lettuce ine 1.3 miriyoni tweets mushure mekurasika Vana Hyunjin inodzokera kuJYP Bubble apo ichidya muriwo
Nei Seohwa akabatwa musungo achidzoka muThe 8th Night?
Kunyangwe Seohwa paakaramba achitaura zvekubata bata chikara, akaudzwa kuti munhu aigona kumumisa chaiye aive muchengeti wekasiketi. Uyu aive asiri mumwe kunze kwaChang-seok. Saka, chikara chakashandisa chipoko musikana kuteya Chang-seok.
Iyo chaiyo mhandara shaman yakaratidza kuti musikana akagamuchirwa nemunyori wenhoroondo uye akazobayirwa kuzomutsa ziso rekushushikana. Akave zvakare nechokwadi kuti shaman aigara ari pasi pekutonga kwavo uye akabatsira kuwana mumwe mushandi wechinomwe mukudzoka.
Kamwe musikana paakazivikanwa saAe-akamhanya akabudirira, chikara chakaita zvese zvaigona kuti chive Chang-seok. Zvisinei, Seohwa haana kurega kutadza kwemusungo kupinde pasi peganda rake. Panzvimbo iyoyo akaramba achivhiringidza chikara.
Zvisinei, mutikitivha uyo kubva pakutanga akatenda zvisizvo Seohwa ndiye aikonzera kufa kwechangobva kuitika kwenhengo dzedenderedzwa rekufungisisa akazova chipingamupinyi. Mugamuchiri wekupedzisira aive mumwe wake. Saka paakaona Seohwa achiedza kurwisa mumwe wake, mutikitivha akamupfura. Iyo monster, zvisinei, inokanda mutikitivha kure uye inoguma ichitevera Chang-seok.
Inguva iyo chikara chave kuda kutora Chang-seok, Seohwa akakanda demo rake, asi zvakashaya basa. Chang-seok aive akabata pakupedzisira.
Ko Chang-seok akafa mushure mekubatwa nechikara muThe 8th Night?
Chang-seok, akambobatwa, akaedza kuita kuti Seohwa amuuraye. Nenzira iyi, Seohwa aifanira kurarama nemhosva hupenyu hwake hwese. Pane kudaro, Seohwa zvine hungwaru anodhirowa kutsamwa pachiso chechikara-chine kumeso kwaChang-seok.
Kubudikidza neizvi, akapedzisira akoka chikara chiri mukati make. Akabva atora Chang-seok kuti ashandise demo kudzinga chikara kamwechete uye zvachose. Saka pakupedzisira, haasi Chang-seok akafa, asi chikara. Chang-seok akabudirirawo mukuviga ziso rekushushikana kwaakawanikwa muThe 8th Night.
Akawanawo Ae-akamhanya akasungwa murenje, uye akamubatsira kuti asununguke pangetani. Chibayiro chaSeohwa ndicho chakange chave kuchinakidzwa muThe 8th Night.
kutaura sei kana achifarira ini
kumuita sei kuti akusuwa seunopenga
zvinorevei kutonhora moyo
kumuita kuti afarire zvakare nekumufuratira
matauriro aungaita neshamwari yako yakakutengesa